အီရတ်နိုင်ငံ ဘဂ္ဂဒတ်မြို့၌ ဆေးရုံမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားရာ အနည်းဆုံး လူ ၂၄ ဦးသေဆုံးကြောင်း သိရ - Xinhua News Agency
အီရတ်နိုင်ငံ ဘဂ္ဂဒတ်မြို့၌ ဆေးရုံမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားရာ အနည်းဆုံး လူ ၂၄ ဦးသေဆုံးကြောင်း သိရ
ဘဂ္ဂဒတ် ၊ ဧပြီ ၂၅ ရက်(ဆင်ဟွာ)
အီရတ်နိုင်ငံဘဂ္ဂဒတ်မြို့ရှိ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်လူနာကုသပေးသော ဆေးရုံတစ်ရုံတွင် မီးလောင်မှုအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ အနည်းဆုံး လူ ၂၄ ဦးသေဆုံးပြီး အခြား ဒါဇင်ပေါင်းများစွာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်း အစိုးရသတင်းအရင်းအမြစ်များက ဆင်ဟွာသို့ ယနေ့ဧပြီ ၂၅ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းမီးလောင်မှုသည် စနေနေ့ညပိုင်းတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ၊ အောက်စီဂျင်ဗူးများ ပေါက်ကွဲရာမှ အစပြုပြီး Ibn al-Khatib ဆေးရုံ မီးအကြီးအကျယ် စွဲကပ်လောင်ကျွမ်းခဲ့ကြောင်း ၊ ယင်းဆေးရုံသည် ဘဂ္ဂဒတ်မြို့တော်အရှေ့ပိုင်းတွင် တည်ရှိပြီး ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် လူနာများအား ကုသမှုပေးနေသောဆေးရုံဖြစ်ကြောင်း အီရတ်နိုင်ငံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မှ ထုတ်ပြန်သောကြေညာချက်တစ်စောင်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ နှင့် မီးသတ်ကားများစွာ အခင်းဖြစ်နေရာသို့သွားရောက်၍ မီးငြှိမ်းသတ်ပေးခဲ့ကြောင်း နှင့် ဆေးရုံအပေါ်ဆုံးထပ်မီးစွဲကပ်လောင်ကျွမ်းခြင်းမခံရစေရန် တားဆီးပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
ယင်းကယ်ဆယ်ရေးသမားများသည် လူနာ ၉၀ ခန့် နှင့် ဆေးရုံဝန်ထမ်းများကိုလည်း မီးလောင်ကျွမ်းနေသောအဆောက်အဦထဲမှ ကယ်ထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်က ဆိုသည်။“ ဆေးရုံကနေ သူတို့ကို ကယ်ထုတ်ချိန်မှာ ဆောက်ဆီဂျင်ဆလင်ဒါဗူးတွေရဲ့ ပိုက်တွေကို ဖြတ်တောက်ပစ်ရလို့ လူနာများစွာအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိခဲ့တယ် ပြီးတော့ အချို့ကြတော့ မီးခိုးငွေ့ မွှန်တာလည်း ခံစားခဲ့ရတယ်” ဟု ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖြည့်စွက် ဖော်ပြထားသည်။
အီရတ်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် Mustafa al-Kadhimi၏ ရုံးမှ ထုတ်ပြန်သော ကြေညာချက်တစ်စောင်တွင် ဝန်ကြီးချုပ်က အခင်းဖြစ်အကြောင်းအရာကို ချက်ချင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ရန် အမိန့်ပေးခဲ့ပြီး သေဆုံးသွားသူများ၏ မိသားစုဝင်များအတွက် နစ်နားကြေးပေးရန် နှင့် ဒဏ်ရာရသူများကို ဆေးကုသမှုစီမံဆောင်ရွက်ပေးရန် လမ်းညွှန်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အီရတ်နိုင်ငံတွင် နောက်ထပ် COVID-19 အတည်ပြုလူနာ ၆,၉၆၇ ဦး စစ်ဆေးတွေ့ရှိကြောင်း နှင့် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် လူနာပေါင်း ၁,၀၂၅,၂၈၈ ဦးထိ ရောက်ရှိလာကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ပြီး နာရီအနည်းငယ်အကြာတွင် အဆိုပါ ဆေးရုံမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ထို့ပြင် အီရတ်နိုင်ငံ၌ COVID-19 ရောဂါဖြင့် သေဆုံးမှုအသစ် ၄၃ ဦးရှိခဲ့ရာ စုစုပေါင်း သေဆုံးသူ ၁၅,၂၁၇ ဦးထိရှိလာကြောင်း သိရသည်။(Xinhua)
At least 24 killed in fire at Baghdad hospital — official sources
BAGHDAD, April 25 (Xinhua) — At least 24 people were killed and dozens injured inahuge fire that broke out inahospital treating coronavirus patients here in the capital of Iraq, official sources told Xinhua on Sunday.
The incident occurred late on Saturday night when several oxygen cylinders exploded, settingahuge fire at Ibn al-Khatib Hospital, which is dedicated to treating coronavirus patients on the eastern side of the capital, saidastatement released by the country’s civil defense.
Civil defense teams and firefighting vehicles arrived at the scene to put out the fire and were able to prevent the fire from reaching the upper floors, the statement said.
It also reported 43 new COVID-19-related deaths, bringing the national total to 15,217. Enditem
တရုတ်နိုင်ငံက အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံသို့ အရေးပေါ်အစားအစာအကူအညီများ ပေးအပ်